I-Chiquita njengoko igama licebisa yeyona incinci kumagumbi ethu, alungele isibini. Le ndlu inegumbi lokulala eline-en-suite, ikhitshi-diner kunye ne-terrace enkulu yangasese. Ikhitshi yikhitshi langoku elifakwe i-oveni egcwele ubungakanani kunye ne-ring hob emi-4. Inomatshini wokuhlamba, imicrowave kunye nefriji/isikhenkcisi. Kananjalo inomgangatho wokufudumeza ngaphantsi kwiinyanga zasebusika ezibizwa ngexabiso le-3-5 ye-euro ngosuku.
IMolino Felix yindawo yokusila eyimbali ebekwe ecaleni komlambo iGor yalungiswa ngothando yaya kutsho kwiindawo ezi-3 zokurenta ezahlukeneyo nganye inepatio yayo okanye ithala. Kumnyango weSierra de Baza kwaye ngaphakathi kweGeoparque de Granada iindawo ezingqongileyo ziyamangalisa. Ukufikelela ngokulula kwi-A92N uya kumangaliswa ukuba ukwimeko entle kangakanani na ekujongeni lo mmandla mhle weAndalucia. Nokuba yiholide yokuzonwabisa, indawo yokuphumla yokuphumla okanye ujonge ikhaya lamaphupha akho, iMolino Felix yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala.
Umxube wanamhlanje kunye ne-rustic, i-Chiquita inakho konke okufunayo ukuze ujabulele ukuhlala kwakho kunye nokuphumla.
Uya kuba nethala lakho elikhulu lophahla elineembono phezu komlambo kunye nentlambo. Ukwanakho nokufikelela kwiigadi ekwabelwana ngazo kunye nedama elinehombiso, iindawo zokuhlala elangeni, iitrampoline, i-badminton okanye i-volleyball net kunye netafile yentenetya. Kukwakho neendawo ezahlukeneyo ngaphakathi kwegadi ebanzi yokuphumla kwaye ukonwabele indawo yangaphandle.
Sihlala sikuvuyela ukunceda xa usifuna, ngakumbi ngeengcebiso zasekuhlaleni kunye neengcebiso malunga nokuba ungandwendwela phi.
Ipaki yeSizwe yaseSierra de Baza imnandi kubathandi bezilwanyana zasendle, enemithi yompayina ekhethekileyo kunye nothotho lweentaka ezininzi. Kukho iziko leendwendwe ezinolwazi malunga neendlela zokuhamba kunye neendlela zokuhamba ngeebhayisikili zeentaba zokulandela. Ngaphakathi kweendawo ezingqongileyo kukho intaphane yeentlobo ezahlukeneyo zemisebenzi ye-adventure efana ne-karting, i-quad biking, ukutyibilika kunye nemidlalo yasemanzini kwichibi lamanzi acocekileyo akufutshane njl.
Indawo yokupaka isimahla, ungapaka endleleni izinyuko ezimbalwa ukusuka emnyango okanye kwindawo yethu yokupaka ngaphandle kwendlela. Izikhululo zikaloliwe kunye nezikhululo zeebhasi ezikufutshane ziseGuadix apho unokukhwela khona ibhasi okanye iteksi yonke imihla ukuya eGor.
Mininzi iminyhadala yasekhaya kunye neefiestas ukubona kunye nokwazi inkcubeko. I-Gor iqhele ukuba yilali encinci yasentabeni, nangona kunjalo ukuqala nge-6 ka-Agasti zii-fiestas eziqhelekileyo zase-Andalusi kunye neenkunzi zenkomo nge-8th, 9th & 10th.